Hafatry ny eveka, novambra 2010 | victoire-rasoamanarivo.it
Vokatry ny fifampizarana ny zava-misy nataonay nandritra izao fivoriam-be fanao isan-taona izao dia mahafaly anay Eveka ray aman-dreninareo ny mampita hafatra fohy hanampy antsika hiatrika ny fanomanana ny fiavian’ny Tompo eo amin’ny an-davanandrom-piainantsika manontolo. Ny fiavian’ny Tompo moa dia tsy inona fa fotoana iainanana sahady ny fiaraha-monina amin’ “Andriamanitra eto amintsika”. Koa ny ezaka hiaraha-manao amin’izany indrindra no indro atolotra antsika mianakavy eto.
Andeha isika hiakatra any amin’ny tendrombohitry ny Tompo, hampianatra antsika ny Lalàny izy mba hizorantsika manaraka Azy (Iz 2,3)
Fa ny sento amam-pijaliana handositra (Iz 35,10)
Tebiteby, adin-tsaina, fahoriana no mitambesatra amin’ny maro ao anatin’izao vanim-potoana sarotra izao. Toa very fanahy mbola velona ny ankamaroan’ny vahoaka, indrindra fa ny tanora maro an’isa. Inona ny vahaolana? Mazava ny Tenin’I Jesoa maniraka antsika hanambara zay hita sy re : “mahiratra ny jamba, afaka ny mandringa, sitrana ny boka, malady ny marenina, atsangana ny maty, torina amin’ny malahelo ny Evanjely ary sambatra izay tsy tafintohina noho ny amiko”( Iz 35, 5-6). Manana ny anjara-biriky isika tsirairay avy hahatomombana izany : Ny fianakaviana mijoro ho ohatra velona amin’ny teny sy atao, ny fiaraha-monina haneho ireo soa toavina mendrika ny maha-olona sy ny maha-Malagasy. Ny firenena kosa hitsinjo ny madinika sy ny mahantra araka ny rariny sy ny hitsiny izay fototry ny fiadanana. Manana ny anjara toerany lehibe amin’izany ny “Fifidianana”isan’ambaratongany, hanehoana ny maha olom-pirenena. Ary tsarovy fa vokatry ny “safidy matotra” ireo ezaka mitohy sy maharitra tsy maintsy hotanterahantsika. Miseho ankarihary amin’ny tsy fivadihana amin’ny teny nomena io safidy io fa indrindra ho antsika Tompon’andraikitra isam-baratongany.
Amboary ny làlan’ny Tompo, ahitsio ny halehany ( Iz 40,3)
Miantefa amintsika tsirairay avy io antsom-pibebahana io. Tsy ho tanteraka izany raha tsy manaiky ho tarihin’ny Fanahin’ny Tompo isika: “Fanahin’ny fahendrena amam-pahazavan-tsaina, fanahin’ny fifidianana am-paherezana, fanahin’ny fahalalana amam-pahatahorana ny Tompo…” (Iz 11, 2). Samy nandray io Fanahy io isika rehetra, ary izy ihany koa no nahatonga nofo ny Zanak’Andrimanintra monina eto amintsika. Ka na eo aza ny fahalementsika olombelona, nofo aman-drà, dia sahia manao asam-pibebahana mendrika tsara : miady amin’ny kilema sy ny fitiavan-tena, miezaka hanandratra avo ny soa iombonana. Aoka samy hiara-mijoro isika rehetra hiahy ireo anaovana tsindry hazolena. Izay te hitondra dia aoka izy hilatsaka hanasoa ny besinimaro. Tsy ronono an-tavy na teny poak’aty, na lainga tsara lahatra lava izao no andrasan’ny vahoaka amin’ireo “vato nasondrotry ny tany” fa ohatra velona mampibaribary ny soa iombonana. Fantaro fa “ny voany no ahafantarana ny hazo”( Mt 12,33)
Emanoela : Andriamanitra eto amintsika (Iz 7,14)